Midowga Afrika oo sheegay in ciidamada Itoobiya aanay qayb ka aheyn AMISOM – SBC
Midowga Afrika oo sheegay in ciidamada Itoobiya aanay qayb ka aheyn AMISOM
Posted by Webmaster on February 24, 2012 Comments
Gudoomiyaha Ururka Midowga Afrika Jean Ping ayaa sheegay in ciidamada Itoobiyaanka ee gudaha u soo galey Soomaaliya ee dagaalada kula jira Al-Shabaab isla markaana qabsadey qaybo ka mid ah gobolada Soomaaliya inaanay qayb ka aheyn ama aanay ku jirin hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo yaqaan AMISOM.
Jean Ping ayaa hadalkan ka jeediyey xarunta wasaarada arimaha dibada Britain ee FCO xili uu shir jaraa’id wadajir ula qabtey Ra’isalwasaaraha UK David Cameron, Ra’isalwasaaraha dawlada KMG Soomaaliya & Xoghayaha guud ee qaramada Midoobay Ban K-Moon.
Mr Ping ayaa sheegay in ciidamada Itoobiyaanka ay ku egyihiin taageerada hawgalka ka dhanka ah Shabaabka waxaana uu sheegay in ay u qorsheysan tahay AMISOM inay si deg deg ah ciidamo ku geyso magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay oo gacanta Al-Shabaab ay ka bixiyeen ciidamada Itoobiya oo guluf dagaal ku soo qaaday gobolada Baay iyo Bakool.
Ciidamada AMISOM ee la geynayo magaalada Baydhabo ayuu ku sheegay Jean Ping in ay tiradoodu gaari doonto 2700 oo askari kuwaasi oo ka imaan adoona wadamada Ugandha & Burundi.
Jean Ping wuxuu carabka ku adkeeyey in ciidamada AMISOM laba sano ka hor ay ku koobnaayeen qayb yar oo kooban oo ka mid ah magaalada Muqdisho, iyagoo ilaalinayey hay’adaha dawlada balse wuxuu sheegay in haatan ay qaadeen hawlgalo ay ku jihaysan yihiin goobo ka baxsan caasimada, waxaana uu sheegay in ay u qaybiyeen Soomaaliya afar qaybood oo kala ah Zone 1, 2, 3 & 4 kuwaasi oo ka mid tahay Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo & Gaalkacyo.
Docda kale Jean Ping wuxuu xusey in ururka midowga Afrika uu soo dhaweynayo qaraarka tirsigiisu yahay 2036 ee ka soo baxay golaha amaanka ee qaramada midoobay ee ku aadan kordhinta iyo balaatinta hawlgalka ciidamada AMISOM.